Hijanona ho mpiara-miasa akaiky amin’i Madagasikara hatrany i Etazonia araka ny fanambaran’ny masoivohony Michael Pellitier omaly teny Ambaranjana nandritra ny fankalazana ny fetim-pirenena Amerikanina.Sehatra iaraha-miasa ny fampianarana, fampandrosoana, ny sosialy ary ny politika.
KOLIKOLY AMIN’NY BALNA KITRA
Tsy vao izao no mamofompofona kolikoly lava ny baolina kitra Kaongoley fa efa nitranga ihany koa izany tamin’ny tompondakan’i Afrika ho an’ny latsaky ny 23 taona ny 24 aprily teo. Tamin’io fotoana io moa dia tena najanona tsy hanohy ny fifaninanana mihitsy izy ireo.
AZO SARY NISIKOTRA NIFY
Teo am-pisokirana nify mihitsy ny minisitry ny serasera no azo sary tamin’ny TVM nandritry ny didim-pitsaran’ny HCC nampahafantatra ny depiote lany.
Efa mandeha ny fanadihadiana momba ny volan’ny vaksiny, hoy ny minisitry ny fahasalamana omaly. Efa nisy ny olona nampidirina am-ponja vonjimaika noho ny ahiahina fanodinkodinana ny famatsiam-bola momba ny vaksiny.
TOVOLAHY VOATIFITRY NY UIR
Tovolahy vao 17 taona ary manan-janaka telo volana ilay voatifitry ny polisin’ny UIR tetsy amin’ny Cenam 67ha omaly maraina. Raha vao nahita azy nitsirara tamin’ny tany ka maty ny namany telo dia nitolo-batana avy hatrany. Mpanendaka eny amin’ny manodidina izay efa narahi-maso efa elaela izy ireo. Handeha hanao ny asa ratsiny izy no nosamborina ary mbola nitsoaka ihany, raha araka ny filazan’ny polisy.
Nampitandrina sahady ny CENI tao Toamasina mahakasika ny tsy fanarahan-dalàna izay hataon’ny kandidà roa. Eny amin’ny toerana tsy tokony hametahana afisy no hametahan’izy ireo an’izany satria angamba kandidam-panjakana ka mahatsapa tena tsy azo atao na inona na inona. Notsipihan’ny CENI mazava fa mampigadra an-tranomaizina ny tsy fanarahan-dalàna mahakasika ny fampielezan-kevitra.
FISAMBORANA MPIVAROTRA RONGONY
Mitohy ihany ny fisamborana mpivarotra rongony eny Anosizato sy Anosipatrana. Nisesy izany ary mbola nisy sahy manao ilay asa ihany hatreto. Lehilahy iray indray no voasambotra ary mbola nahitana rongony amina gony tao amin’ny toeram-pivarotany. Mbola ady lehibe eto an-drenivohitra ny fiparitahan’ny zava-mahadomelina. Mila eny amin’ny lalam-pirenena izy ireny dia efa tratra mba tsy ho tonga aty ka mitarika ny korontana ara-tsosialy isan-karazany.
DOSIE MALOTON’I HOLIJAONA RABOANA
Nivoaka sahady ary niparitaka ny dosie maloto an’i Holijaona Raboana izay filohan’ny fanatontosana ny IEM. Naelin’ny zanak’i Manandafy Rakotonirina tamin’ny tambajotra sosialy ny tantara maloton’ilay rangahy, hatramin’ny fidirany am-ponja in-droa misesy tany aloha tany noho ny fisolokiana. Anisan’ny voateny betsaka koa ny raharaha Flamco tamin’ny fitondran’ny Pr Zafy Albert izay tena fandrobana tanteraka ny volam-panjakana nomen’ny mpamatsy vola.
TSY FANAJANA NY FIAINANA MANOKAN’NY OLONA
Misy fanadihadiana misokatra nanomboka omaly mahakasika ny filazan’ny olona fa misy « caméra cachée » eny anivon’ny toeram-pandraisam-bahiny (chambre d’hôtel) iray eny 67ha. Nanamarina izany nanomboka omaly ny mpitandro ny filaminana satria heloka bevava ary tsy fanajana ny fiainana manokan’ny olona ny tranga toa izany.